Literatiora malagasy: “Kolontsaina iray makadiry… ny soratra”, hoy i Hajaina | NewsMada
Literatiora malagasy: “Kolontsaina iray makadiry… ny soratra”, hoy i Hajaina
Par Taratra sur 24/11/2020
Andrianasolo Hajaina Naomy, poety, mpanoratra, mpikabary, mpanatontosa sy mpilalao tantara fihaino, mpamoron-kira. Avy amin’ny traikefa matanjaka ananany eo amin’ny tontolon’ny soratra no nilazany fa: “ny soratra no anton’ny fandaminam-piainana rehetra. Ny lalàmpanorenan’ny firenena iray, tsy maintsy voasoratra”. Efa niorim-paka roanjato taona eto Madagasikara ny soratra. Noho izany, efa tafiditra anatin’ny kolontsaina malagasy, raha ny fanazavany hatrany. “Fampitan-kafatra haingana sy mora voarain’ny vahoaka ny soratra, raha tsy hiteny afa-tsy ny hita maso. Ohatra, miainga eo Ambohijatovo ka hatrany amin’ny Gara Soarano, ahitana soratra ampolony maro ny havia sy ny havanan’ny lalana. Ny mahavariana kely fotsiny, ny 90%-n’ireny, tsy teny malagasy”, hoy i Hajaina.
“Na izany aza, manantombo sady mitoetra kokoa raha voakaly ho haisoratra ny soratra. Izany no mbola tsy maha lefy laza ny haisoratr’ireo mpanoratra kalaza taloha ary mampitombo hery ireo mpanoratra kalaza ankehitriny. Asa soratra anabeazana ny zanaka malagasy eto Madagasikara sy manerana izao tontolo izao. Midika izany fa kolontsaina iray makadiry tsy lefin’ny vanim-potoana ary aina tsy azo ialana iveloman’ny fiarahamonina ny soratra”, hoy hatrany i Hajaina.
Fantatra fa filohan’ny Fikambanan’ny poety sy ny mpanoratra malagasy “Havàtsa-Upem” Andrianasolo Hajaina. Mpikambana mpiombona antoka ao amin’ny Akademiam-pirenena malagasy, manomana “thèse de doctorat” momba ny literatiora, mpampianatra mpikaroka eny amin’ny oniversiten’Antananarivo, sokajim-pampianarana “études malagasy”.